एक्कासी चीनमा फेरी को’रोना भा’इरसबाट म’र्नेहरूको संख्या ह्वातै बढेपछि विश्वमै सनसनी म’च्चियो ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/एक्कासी चीनमा फेरी को’रोना भा’इरसबाट म’र्नेहरूको संख्या ह्वातै बढेपछि विश्वमै सनसनी म’च्चियो !
काठमाडौं, ६ बैशाख । को’रोना भा’इरसबाट म’र्नेहरूको संख्या संसारभर १ लाख ५४ हजार २५६ पुगेको छ । उही समयमा, को’रोना भा’इरस सं’क्रमित व्यक्तिको संख्या पनि २२ लाख ५० हजार ६६० पुगेको छ । पछिल्ला धेरै दिनहरूमा अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सं’क्रमण र मृ’त्युको रिपोर्ट आएको छ।चीनमा म’र्नेको संख्या फेरि बढेको छ। रिपोर्टका अनुसार हिजो मात्रै चीनमा म’र्नेको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा बढेको छ । यस बृद्धिका अनुसार हिजो चीनमा १२९० जना मानिस मका छन् ।
यसकारण, चीनमा कुल मृ’त्यु संख्या अब ४६३२ पुगेको छ । किन एकैसाथ सं’क्रमित व्यक्तिहरूको संख्या बढेको भन्ने तर्क आएको छ । हिजो चीनमा ३२५ नयाँ घ’टनापछि, संक्र’मित मानिसहरुको संख्या अब ८२ हजार ७१९ पुगेको छ।
उही समयमा, १९७६ को विनाशकारी सांस्कृतिक क्रा’न्तिपछि चीनको जीडीपी सबैभन्दा ठूलो गि’रावट आएको छ । यो २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा ६.८ प्रतिशतले घ’टेको छ । यस अवधिमा, को’रोना भा’इरस म’हामारीको वि’रूद्ध ल’ड्न अप्रत्याशित कदमहरूको कारण विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अ’वरोध खडा भयो।
थप रूपमा, पाकिस्तानलाई ८.४ लाख अमेरिकी डलरले को’रोना भा’इरस वि’रुद्ध ल’ड्न सहयोग गरेको छ । सहयोगको घोषणा अमेरिकी राजदूत पॉल जोनले शुक्रबार गरेका थिए । उही समयमा, जापानमा को’रोना भा’इरसबाट मानिसहरूलाई जोगाउन अबेनोमास्क प्रधानमन्त्रीको आदेशमा जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिएको छ।
के तपाई सुनचाँदी किन्दै हुन्हुन्छ ? यस्तोआजको बजार भाउ
नेविसंघका नेता कुन्दन काफ्लेद्वारा विवाह खर्च कटाएर कोरोना कोषमा सहयोग